Ny iPhone SE sy iPad Pro 9,7 ", OS X 10.11.4 ary iOS 9.3, teny fototra tamin'ny 21 martsa ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy any Mac aho | Avy any Mac aho
Ny iPhone SE sy ny iPad Pro 9,7 ″, OS X 10.11.4 ary ny iOS 9.3, ny teny fototra tamin'ny 21 martsa ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Miguel Angel Juncos | | Apple, Mac OS X, About us, Apple products
Misaotra indrindra an'i ny teny fototra tamin'ny alatsinainy 21 martsa lasa teo, Nanana herinandro feno vaovao izahay na amin'ny rindrambaiko miaraka amin'ny fahatongavan'i OS X 10.11.4 sy iOS 9.3 ary koa ny fitaovana miaraka amin'ny fampisehoana ilay vaovao 9,7 ″ iPad Pro sy iPhone SE. Etsy ankilany, raha te hijery ny fampisehoana ho an'ny tenanao ianao dia efa misy amin'ny horonan-tsary amin'ny alàlan'ny YouTube ary avy amin'iza Niresaka taminao izahay tamin'ity lahatsoratra ity.
Na izany aza, tsy ny zava-drehetra no vaovao tsara, satria taorian'ny fampisehoana, ireo mpampiasa izay vonona hanavao ny fitaovany, dia nanana olana rehefa niditra tao amin'ny Kaonty fandefasan-kafatra hafatra sy FaceTime amin'ny OS X 10.11.4 ary koa olan'ny fampahavitrihana ao amin'ny iOS 9.3 amin'ny fitaovana taloha, hany ka noterena hanala vonjimaika ny fanavaozana an'ireo fitaovana ireo i Apple.
Na izany aza dia afaka mahita vaovao takin'ny mpampiasa toa azy izahay tenimiafina fiarovana ao amin'ny fampiharana Notes sy ny mifanentana amin'ny Evernote ary koa ny fanamboarana bibikely sy fanatsarana hafa toy ny fianjerana nahatonga ny mampifandray ireo fitaovana audio USB na ny fanatsarana ny fampifanarahana ireo adaptatera multiport Apple USB-C.
Ho fanampin'ny fanavaozana ny iOS sy ny OS X ary koa ny rafitra miasa lehibe an'ny orinasa, samy izy roa ireo watchOS mankany amin'ny andiany 2.2 ary tvOS 9.2 miaraka amin'ny fahafaha-mamorona lahatahiry sy manonona azy ireo indray araka ny itiavantsika azy araka ny efa nolazaiko ato amin'ity lahatsoratra ity ho toy ny tutorial.
Taorian'ny nanolorana ireo zava-baovao ireo dia nisy ny tsaho momba ny a maodely MacBook vaovao 12 miaraka amin'ny fanavaozana nohavaozina na dia izany aza mitazona ny endrika mitovy izay hitako mahatalanjona.
Hatreto dia ny famintinana ny herinandro izay hitako fa miavaka indrindra momba izay nambaran'i Apple, hatramin'ny herinandro manaraka. Tratry ny alahady !.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny iPhone SE sy ny iPad Pro 9,7 ″, OS X 10.11.4 ary ny iOS 9.3, ny teny fototra tamin'ny 21 martsa ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
IKEA Planner ho an'ny Mac